Isilinganiso sezikole eSt. Petersburg mayelana nemiphumela yokusetshenziswa
Lapho nje ingane ifika eneminyaka eyisithupha ubudala, abazali baqala ukucabanga ukuthi bangathumela kuphi ingane yabo esikoleni. E-St. Petersburg kunezinombolo eziningi zezikole ezihluke ekubunjweni kokufundisa, kodwa nangendlela yokufundisa. Ukuqaphela ukuqeqeshwa kwesikhungo kungatholakala emiphumeleni ye-Unified State Exam, eyenziwa njalo ngonyaka ekupheleni konyaka. Ngezansi izikole, abafundi babo ababonisa ulwazi oluhle unyaka nonyaka.
I-Physics ne-Mathematics Lyceum №30
Lesi sikhungo sezemfundo esifundazweni sisezindaweni saseVasileostrovsky senhloko-dolobha yaseNyakatho futhi siwela kuqala ekulinganisweni kwezikole eSt. Petersburg. Manje isikhungo semfundo sinezakhiwo ezimbili. Ngesinye kukhona isikole esincane, kwenye ikhona abafundi bezinkambu eziphakathi naphakathi. Isikole savulwa ngesisekelo sesikole, esakhiwe ngo-1837. Kuyathakazelisa ukuthi, kwaze kwafika ngo-1955, kuphela abameli bezocansi ezinamandla abaqeqeshwe lapha. Ngo-1990, isikhungo semfundo sathola isimo se-lyceum engokwenyama nangokwembalo. Leli gama lisinde kuze kube yilolu suku.
Namuhla lesi sikhungo sibheke ukulinganisa kwezikole zaseSt. Petersburg ngenxa yezinga eliphakeme lolwazi lwezingane ezibalwe lapha. Le lyceum iqedile abadumile abaningi. Ukuqeqeshwa kwakubanjwe ngabantu abanjengoDmitry Astrakhan (umculi wezemidlalo kanye nomqondisi wefilimu), uBoris Smolkin (umlingisi), u-Alex Tarn (umbhali), uBoris Ermakov (isazi) nabanye abaningi.
Izingane zingafika esikoleni kuphela emva kwebanga lesithathu. Isethi lenziwe ngezinkomba eziningana. Izingane, kanye nabazali bazo, zingakwazi ukuzikhethela, zinikeze ikusasa labo ngezibalo noma physics. Izibalo zithi isihloko sesibili sezingane siyakuthandwa kakhulu.
I-Gymnasium No. 248
Lesi sikhungo semfundo saqalwa ngo-1993 ngesisekelo senkampani ngokufunda ngokujulile ulimi lwangaphandle. Akuyona into engaqondakali ukuthi lesi sikole saseNgisi esilinganisweni saseSt. Petersburg siqondiswa kahle. Isiqondiso esiholayo esikhungweni semfundo ngabantu. Ukunakwa akuyona nje izilimi zakwamanye amazwe, kodwa futhi nokupela isipelingi, ukufunda, izincwadi zangaphandle, umlando. Izingane ziqala ukufunda izilimi eziningana zangaphandle kusukela ezinsukwini zokuqala. Futhi abafundela iziqu bangafaka isicelo sokwamukelwa ezikoleni eziphakeme eziphakeme zemfundo.
Ngonyaka ka-2007, i-Gymnasium No. 248 yaba umqoqo womncintiswano ngaphakathi kohlaka lohlelo lokusungula izindlela ezintsha zokufundisa. Laba bantu baya ezifundweni ezingakhululekile. Ukuqeqesha kwenzeka ngefomu lezemidlalo. Othisha bayaqiniseka ukuthi ngalezi zilimi zakwamanye amazwe bafunda kangcono kakhulu. Abafundi abahamba phambili banethuba lokuvakashela amanye amadolobha namazwe, bahlanganyele emincintiswaneni yomhlaba jikelele.
School of Economics kanye noMthetho
Ukulinganisa kwezikole zesifunda saseKrasnoselsky saseSt. Petersburg kuvulwe isikole esidumile sezomnotho nomthetho. Ekuboneni kuqala lokhu yisikhungo esijwayelekile semfundo. Labafana beza lapha ngoba beyisikhombisa. Ukuqeqeshwa kwenzeka ngokwezindlela ezijwayelekile zokufundisa. Kodwa-ke, kulapha ukuthi kusukela esemncane bafunda ukuqonda ukubaluleka kwemali. Abaneminyaka engu-10 banolwazi olujulile emnothweni futhi bangangena enkulumweni yokukhulumisana nomuntu omdala ngokulingana okulinganayo. Isikhungo semfundo sinesisekelo esihle sezinto ezibonakalayo nobuchwepheshe. Umtapo wolwazi uvuselelwe njalo.
Imfundo esikoleni ikhokhwa. Ngonyaka kubalulekile ukukhokha cishe ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-20. Inani eliqondile lixhomeke eneminyaka yengane. Esikoleni samabanga aphansi, abazali kufanele bakhokhe kancane. Imali yokubeletha nayo iyamukelwa ukuze ikhokhwe. Ukuze uthole imvume, kuzodingeka uxoxe ngokufutshane futhi unikeze incwadi yezokwelapha ingane.
I-Gymnasium No. 61
Isilinganiso sesikole esifundeni saseVitborg saseSt. Petersburg siholwa yi-gymnasium No. 61. Lesi sikhungo semfundo esiphezulu sekhona iminyaka engaphezu kwekhulu. Ekuqaleni kwakuyisikole sabafana kuphela. Namuhla, izingane ezisuka kokubili zobulili ziza lapha. Kusukela ngo-1993, lesi sikole sithole isimo se-gymnasium. Izingane kanye nabazali ngokuzikhethela bakhethe ukuthi yiziphi izinto ezikhethekile okufanele zizinake kakhulu. Ukuqeqesha kuqhutshwa ngeziqondiso zomzimba nezibalo, zomthetho, kanye nezilimi. Kuyadingeka ukuthi lesi sikhungo silinganiselwe izikole zezilimi eSt. Petersburg.
I-Gymnasium ibhekwa njengenye yezikole eziphakeme kakhulu zezemfundo kuwo wonke iPetersburg. Amadoda athatha imiklomelo kuma-Olympiads, futhi abonisa imiphumela emihle e-Unified State Exam. Ngo-2006, lesi sikole sathola isihloko seSchool Academy. Isikhungo sathola imiklomelo enjalo njenge "School of the Century of Russia", "School High". I-gymnasium yayikhethwe ngokuphindaphindiwe ngomklomelo we-"Best 500 Best Russian Schools". Abazali bahlale bekhuluma kahle ngalesi sikhungo. Bathi abafundisi bayakwazi ukuxhumana nezingane. Umfundi ngamunye unakekelwa kakhulu njengoba kudingeka.
Lyceum Economic № 373
Isikhungo semfundo sathola isimo seLyceum kuphela ngo-2008. Namuhla kuyisikole samanje esinikeza imfundo ephezulu. Akuyona into engaqondakali ukuthi i-Lyceum ifakiwe ekubalweni kwezikole eMasipala waseMoscow waseSt. Petersburg. Izingane zithola imfundo yekhwalithi nge-bias zezibalo. Ukuqaphela ngokukhethekile kubhalwa abafundi besikole esiphakeme. Abaningi abaphothula iziqu bafika emanyuvesi ahloniphekile eSt. Petersburg futhi banethuba lokutadisha mahhala.
Ukuqeqeshwa kwenziwa ngesisekelo sesabelomali. Noma ubani angangena lapha. Amadoda avunyelwe ngemuva kwebanga lesithathu. Asikho isikole samabanga aphansi lapha. Ukuze ufake i-lyceum, abazali, kanye nengane, kudingeka badlulise ingxoxo encane, futhi banikele isitifiketi sokuzalwa kwengane kanye nencwadi yezokwelapha. Abantu abaningi bafuna ukufika lapha. Ngakho-ke, kuyinto efiselekayo ukubhalisa ngonyaka olandelayo wezifundo ngoMeyi. I-lyceum ine-website yayo, lapho ungafunda ulwazi mayelana nabasebenzi bokufundisa, kanye nokucacisa oxhumana nabo ukwenza i-aphoyintimenti ye-interview.
I-Gymnasium No. 116
Lesi sikhungo semfundo asihlanganiswa kuphela ekulinganisweni kwezikole ePhermorsky esifundeni saseSt. Petersburg, kodwa futhi siwela ezikoleni eziphezulu kakhulu ezingu-500 kulo lonke elaseRussia. I-Gymnasium ingumlingani weSt. Petersburg State University. Lokhu kusho ukuthi izingane zingakwazi ukungena eyunivesithi ngaphandle kwezinkinga kwenye yezinto ezikhethekile ezithandwayo kuphela ngesisekelo semiphumela ye-Unified State Exam. Abafundi abangcono kakhulu bathola ithuba lokufunda mahhala.
Labafana banethuba lokuya emakilasini emaphrofayili amabili. Amakilasi e-Humanities ne-physics kanye nezibalo asebenza. Inqubo yezemfundo inikezwa ngabafundisi abangaphezu kuka-50. Othisha bomsebenzi wesigaba esiphakeme kakhulu. Abaningi babo babikezwa ngokuphindaphindiwe isihloko esithi "Mfundisi Wonyaka". Namuhla abafundi abangaphezu kuka-800 bafunda e-gymnasium. Laba bantu baneminyaka engaphezu kwengu-9 ubudala. Ukubhalisa esikhungweni semfundo kungaba kuphela kusukela ebangeni lesi-5. Ngesisekelo sendawo yokuzivocavoca kwesinye isakhiwo, kukhona isikole samabanga aphansi kubafundi abancane kunazo zonke.
Isikole No. 347
Isikhungo semfundo sihola ukulinganisa kwezikole zaseSt. Petersburg (isifunda saseNevsky). Lesi sikole sithandwa kakhulu ngenxa yobuchwepheshe bayo bephrofayela. Ukugxila okuyinhloko lapha kusetshenziswe ngokujulile izilimi zakwamanye amazwe. Lesi yisikole esikhulu kakhulu sesiNgisi eSt. Petersburg. Ukulinganisa kwezikhungo zemfundo encane kakhulu kuqala ngokuqondile nalesi sikhungo.
Abafana baqala ukufunda isiNgisi kusukela ezinsukwini zokuqala. Ebandleni lesihlanu, kunezinye izilimi eziningi ezingaphandle ezengeziwe. Kunezigaba ezingeziwe zabafundi ababengenaso isikhathi sokufunda indaba. Ukunakwa akukhokhelwa kuphela isipelingi sangaphandle, kodwa nokufunda. Ekufundweni kwamabhuku angaphandle, izingane zifundela ngolimi lwazo, futhi ekuqaleni. Imisebenzi enjalo igalela ekwakhiweni kwengqondo, kusize ukuba ufunde ngokushesha ulimi lwangaphandle. Abaphothule esikoleni banethuba lokubhalisa emayunivesithi ahamba phambili aseRussia ku-specialty profile. Abafundi abaningi bakhetha i-Institute of International Relations eMoscow. Kakade ngebanga lesishiyagalolunye labafundi baqala ukulungiselela ukufakwa esikhathini esizayo esikhungweni semfundo ephakeme.
I-Gymnasium No. 433
Isikhungo somnyango jikelele wezemfundo siqondiswe ekuthuthukiseni nasekuqeqesheni izingane ezihlala endaweni yokuhlala yenhloko-dolobha yaseNyakatho. Isikole savulwa ngo-1937. Kodwa-ke, wathola isikhundla sesikhungo semfundo jikelele jikelele ngo-1993. Ngo-2007 lesi sikhungo saba umnqobi emncintiswaneni wezikhungo zemfundo ezethula izinhlelo ezintsha zemfundo. Ngonyaka ofanayo wanikezwa isihloko sokuzivocavoca. Namuhla, lesi sikhungo asigcini nje ngokulinganisa izikole zaseSt. Petersburg, kodwa sithatha izinyathelo zokuqala. Ngenxa yohlelo olukhethekile lokuqeqesha, abafana baqonda ngokushesha izinto ezintsha futhi babonisa imiphumela emihle kakhulu ku-Single State Exam.
Imfundo e-gymnasium ikhululekile. Ukuze othisha abengeziwe bentela bahlanganyele nezingane ngesikhathi sokuphumula. Kungenzeka ukulungiselela abafakizicelo ukuba bangenwe. Kodwa-ke, abafana abaya njalo emakilasini futhi begcina kahle amanothi, ngaphandle kwezinkinga, bangene amanyuvesi ahloniphekile eSt. Petersburg naseMoscow.
I-Gymnasium No. 526
Lesi sikhungo semfundo sonyaka wesithathu sibalwa ekulinganisweni kwezikole eSt. Petersburg ngemiphumela ye-USE. Izingane azigcini nje ngokudlula izivivinyo kahle, kodwa futhi zithatha imiklomelo kuma-Olympiads. Ukunakekelwa kubhalwa kuzo zonke izici ezinkulu. Lena izibalo, i-physics, ulimi lwesiRashiya, izincwadi, umlando, ulimi lwangaphandle. Izindlela ezisetshenziswayo zokufundisa zisetshenziswa, okuvumela abafundi baqonde ulwazi ngokushesha. Ngezingane ezifundweni eziyinhloko, othisha basebenza ngendlela edlalayo.
Ngonyaka kaDisemba i-gymnasium inosuku oluvulekile. Abazali banethuba lokujwayelana nabasebenzi bokufundisa, ukucacisa, yikuphi indlela ukuqeqesha okuqhutshwa ngayo. Amadokhumenti wokungeniswa atholakale kusukela ngo-Ephreli. Ukuqala ngomfundi ozayo kuyinhlangano engxoxweni encane. Lokhu kusivumela ukuba siqonde ukuthi iyiphi ingane eyathuthukiswa ngayo. Phela, ukuqeqesha e-gymnasium kuqhutshwa ngezici ezihlukahlukene. Kukhona ithuba lokungena emnyangweni wezemvelo-wezibalo, wobuntu noma wangaphandle.
UPeterhof Gymnasium ka-Emperor Alexander II
Lesi sikhungo semfundo jikelele siqala engqondweni, uma sicabangela izikole ezingcono kakhulu zaseSt. Petersburg. Ukulinganisa kwezikole ezingcono kakhulu esifundeni sePetrodvorets kuholwa yisikhungo. Lesi esinye sezikole ezindala kunazo zonke enhloko-dolobha yaseNyakatho. Abaqedile bokuqala bakwazi ukuthola isitifiketi eminyakeni engaphezu kwengu-100 edlule. Isikole sathola isimo sezemidlalo ekuqaleni kweminyaka engu-90. Kusukela ngaleso sikhathi, cishe unyaka ngamunye isikhungo semfundo sasizwa ezindabeni zemfundo. Abafundi bahlala bethola imiklomelo kuma-Olympic ngezici eziyinhloko. Othisha abaningi banesimo se "Teacher of the Year".
Kuze kufike ebangeni lesihlanu, izingane ziqeqeshwe ohlelweni lwezemfundo jikelele. Ukuqaphela ngokukhethekile kubhalwa ekudaleni nasekuthuthukiseni ukucabanga okunengqondo. Izigaba eziwusizo emathematika nomlando wemvelo efonini yezemidlalo zenziwa. Kusukela ebangeni lesihlanu, abafundi bakhetha ukuthi bazoqhubeka yini nemfundo yabo. Kunamaphrofayli amathathu - physico-mathmatical, humanitarian, kanye nakwamanye amazwe.
Isikole № 411 "Harmony"
Lesi sikhungo asigcini nje ngokulinganisa izikole zaseSt. Petersburg ku-USE, kodwa futhi sithatha enye yezindawo zokuqala ezikoleni eziphezulu ezingu-20 ezinhle kakhulu. Okugxilwe ngokuyinhloko ekutadisheni okujulile kweNgisi. Kulesi siqondiso nabantwana baqala ukuhlanganyela ekilasini lokuqala. Isikhungo semfundo sisekelwe ngo-1986. Futhi kakade ngo-1991 isikole saqala ukufundisa izingane ngesiqondiso esikhuluma isiNgisi. Namuhla, abafundi babonisa imiphumela emihle kakhulu kuma-olympiads ngolunye ulimi. Abaningi bangangena ezifundweni eziphambili zaseRussia ngesisekelo samahhala.
Isikhungo semfundo sinomnyango wangaphambi kwesikole. Lapha, ukuze uthole imali eyengeziwe, izingane ezineminyaka engama-5-6 zingadinga. Ukulungiselela kwangaphambi kwesikole kwenziwa ezindaweni eziyinhloko. Izingane kusukela ebusheni ziqala ukufunda isiNgisi ngendlela yezemidlalo. Cishe bonke abafana abasebenza emnyangweni wangaphambi kwesikole bayaqhubeka befunda esikoleni esifanayo.
I-Dance School "Indlunkulu"
Echaza izikhungo ezithandwayo kakhulu zemfundo, akunakwenzeka ukukhumbula ukulinganisa kwezikole zomdanso waseSt. Petersburg. Phela, akubalulekile kuphela imfundo ezinkampanini ezikhethekile, kodwa futhi nokuthuthukiswa kokudala. Esinye sezikole zomdanso ezidume kakhulu eSt. Petersburg yisikhungo "seNdlunkulu". Noma ubani onentshisekelo kunoma yimuphi ubudala wamukelekile lapha. Izivakashi ezincane kunabo bonke abafana namantombazane eneminyaka emihlanu. Amakilasi aqhutshwa nsuku zonke kusukela ngo-12: 00 kuya ku-23: 30. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu angakhetha isikhathi sokuqeqesha eyedwa.
Isiqondiso esithandwa kakhulu ngumdanso womgwaqo. Ukufundisa ngokuvamile kuqhutshwa abantu abaneminyaka engu-15-20. Abafundi abaningi bathatha imiklomelo emincintiswaneni yomhlaba wonke. Amakilasi ngabanye atholakala ngemali eyengeziwe. Othisha bangahlanganyela ekukhiqizeni umdanso womshado.
Amaqembu othisha aqala ukuqala kusukela ngo-September. Nokho, uma unezindawo zamahhala, ungaqala ukuqeqeshwa noma kunini. Ephelele kunazo zonke amaqembu abantwana nabesifazane. Kodwa ithimba lamadoda esikoleni sokudansa alisoze lanele.
Uphi ukunikeza ingane ukuqeqeshwa?
Kuyinto efiselekayo ukucabanga ngokukhetha isikole sabazali kakade lapho umntwana eqala ukuya enkulisa. Uma uneminyaka emihlanu, sekuvele kudingekile ukunquma isikhungo jikelele semfundo. Izakhamuzi zenhloko-dolobha enyakatho kufanele zifunde kuqala ukulinganisa kwezikole eSt. Petersburg. Mayelana nalokhu, akufanelekile ukuthatha kuphela ukulula kwendawo yesikole, kodwa futhi nethalenta lomntwana. Uma ngokushesha ezwa ulwazi futhi enengqondo enhle yokucabanga, i-lyceum yezomnotho izohambisana ngokuphelele. Kubalulekile ukuthi ingane iya esikoleni ngenjabulo.
Ungakhohlwa mayelana nentuthuko yokudala. Esikhathini ngasinye esikoleni ngasinye kunezinkinobho zemidlalo yaseshashalazini, ama-studio e-art, kanye nezigaba zezemidlalo.
Uyazi ukuthi luhlobo luni lomfula olugeleza ePrague?
Iyiphi ingxabano e-biology: incazelo yomqondo, isakhiwo nemisebenzi
Incazelo yendlu: iresiphi yekwakhiwa "okumnandi"
Ebusuku, uSuku Cream "Natura Siberika": ukubuyekezwa. "Natura Siberika": mhlophe, firming, amafutha ebusweni ukhilimu Izibuyekezo
Uhlu nezidalwa zomoya ezinamandla kanye incazelo. Legends of nezidalwa zomoya
Uyini uphawu oyinhloko isimungumungwane omdala?
Amaphutha ezibhubhisa isithombe sakho, noma lokho okungafanele ukwenze uma ukugqoka ibhulukwe
Urography Excretory - eyodwa yezindlela kakhulu ulwazi ekuxilongeni isifo sezinso
"Lapho umdlavuza eNtabeni ikhwela": Inani elifanayo nezibonelo phraseologism ukusetshenziswa
Izifundo ngamalungiselelo zokuphila futhi khona: kanjani ukuheha inhlanhla nemali endlini
"UAZ Patriot": razdatka. Izici zedivayisi, kanye nokubuyekeza